Ireo mpanamboatra sy mpamatsy fanasan-damba any Sina | Haicheng
Fitarihan-kevitra: ny sanitiser fanasan-damba dia famonoana otrikaina marobe miasa, toy ny Dettol, dia famonoana otrikaretina iraisana iraisam-pirenena ho an'ny fampiasana ao an-trano. Ny fanasana milina sy ny fanasan-tanana dia mety, ny fanasana, fanampin-javatra kely, dia mety hamono ireo viriosy sy bakteria amin'ny akanjo. Ny sanitiser fanasan-damba koa dia nanampy betsaka, ary rano be mifangaro ao anaty ampahany iray taorian'ny nanosehana ny tany sy ny birao, izay nandray anjara tamin'ny fanamorana sy famonoana otrikaretina. Azo ampiana rano kely koa hofafazana hanaparitahana ny rivotra sy ny zavatra miseho, koa tsara hanalana fofona. Ny tahan'ny fanamorana dia mety hahatratra 99,99%. Ny orinasan-tsika dia afaka manamboatra tsipiriany samihafa sy loko ranoka ho an'ny mpanjifantsika, 500ml 750ml 1000ml 1200ml 2500ml 3800ml sns. Ireo singa fototra amin'ny famokarana akora dia ekena iraisam-pirenena dimethyl phenol sy surfactants, olona sy tontolo iainana. Ny orinasanay dia manana milina famenoana rano mandeha ho azy feno sy tsipika famonosana mba hiantohana ny kalitao sy ny hafainganan'ny famenoana. Ary ny fisafoana kalitao avy amin'ny akora mankany amin'ny vokatra vita dia tompon'andraikitra amin'ny mpiasa manokana. Famaritana kalitao avo roa heny amin'ny atrikasa sy laboratoara hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra ao amin'ny orinasa. Ny fitaovana fonosana novidianay dia mifanaraka amin'ny fenitry ny fitaterana iraisam-pirenena. Miasa mandritra ny 17 taona ny orinasanay, manana mari-pahaizana fanondranana isan-karazany sy mari-pahaizana famokarana ekena any Shina sy iraisam-pirenena koa izahay. Malalaka sy haingana be ny fanadiovana ny fadin-tseranana. Manana ny traikefa amin'ny fanondranana any Japon, Hong Kong, Azia atsimo atsinanana, Eropa ary firenena maro hafa koa izahay. Manana ekipa mpivarotra 24 ora aorian'ny hamaly sy hamaha ny fanontaniana ho an'ny mpanjifa. Ho an'ny vokatra namboarina dia mitaky fametrahana ny orinasan-tsika, rehefa mandefa, mandoa ny ambiny amin'ny fandoavam-bola miaraka amin'ny faktiora mitentina.
1 SANITISER LAUNDRY 500ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 24, tranga 1000/40 HQ
2 SANITISER LAUNDRY 750ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 18, tranga 1000/40 HQ
3 SANITISER LAUNDRY 1000ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 12, tranga 1000/40 HQ
4 SANITISER LAUNDRY 1200ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 10, tranga 1000/40 HQ
5 SANITISER LAUNDRY 2500ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 5, tranga 1000/40 HQ
6 SANITISER LAUNDRY 3800ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 3, tranga 1000/40 HQ
Sehatra fampiharana: Famonoana otrikaretina amin'ny akanjo sy trano.
Sava lalana Fanomezana ho an'ny orinasa manokana logo OEM fampiasa ao an-tokantrano multi-function milliliters isan-karazany militerano lamba sanitiser sy fitafiana ao an-trano ary famonoana otrikaretina sy fanamorana ny ankohonana
Karazana fanadiovana fanasana rano
Minimum Order Quantity Tavoahangy 5000
Description sanitiser fanasan-damba
famaritana 500ml 750ml 1000ml 1200ml 2500ml 3800ml
Fampiasana Fanasan-masinina na fanasana tanana, ampio vola kely, azonao atao ny mameno ny otrikaretina fitafiana, kely ny rano araraka ao anaty rano, ary namafa ny tampon'ny tokantrano mba hamita tanteraka ny famonoana otrikaretina, famonoana otrikaretina sy akanjo
fahafahana araka ny sombintsombiny 1000000 isam-bolana
Votoatin'ny singa mavitrika Mpiasa mavitrika ambonin'ny tany sy P-chloro-m-xylenol
Fomba fatra ranon-javatra
Mpividy lasibatra lehibe fivarotana lehibe, hotely, e-varotra, orinasam-barotra, sns
Andininy fonosana Carton-tavoahangy
Fanamarihana ho an'ny fampiasana ivelany ihany, tsy misy fampiasana am-bava.
Fepetra fitahirizana tazomy amin'ny toerana maina sy maina.
Ora nanomezana Tavoahangy 5000-20000 15 andro
tavoahangy maherin'ny 20001 nifampiraharahana
Atrikasa fanadiovana ambaratonga GMP 100.000
Teo aloha: Savony tànana bakteria
Manaraka: Spry mamono otrikaretina biby
Vokatra famonoana otrikaina
Sina 75 famonoana alikaola
Gel manaparitaka otrikaretina
Famonoana otrikaretina tanana